DF oo jawaab kulul ka bixisay hanjabaadii amiirka Al-Shabab - Idman news
DF oo jawaab kulul ka bixisay hanjabaadii amiirka Al-Shabab
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa waxay hoos-u-dhigtay hanjabaada ka timid horjoogaha guud ee Al-Shabaab ee ku wajahneyd ergadda ka qeybgaleysa xulista baarlamaanka 11aad ee soo aadan.
La-taliyaha koowaad ee arrimaha amniga xafiiska ra’iisul wasaaraha, Cabdi Diirshe oo u waramay VOA-da, ayaa carabka ku adkeeyay in ay dedaal badan ku bixin doonan sidii loo burburin lahaa cagajugleynta maleyshiyada.
“Siyaasadda dowladda federaalka ee ku wajahan kooxda Al-Shabaab way cadahay. Sidaas darteed, waa la jebin doonaa, waana laga ciribtiri doonaa dalka. Qorshe ayaa nooga degan adkeynta amniga goobaha ay ka dhaceyso doorashooyinka guud ahaan dalka,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Amiirka Al-Shabaab oo cod laga soo duubay ay saxaafada maleyshiyadiisu faafisay asbuucii hore wuxuu ku caddeeyay in ay beegsan doonan dhamaan ergada, isaga oo ku booriyey in ay ka baaqsadaan kahor inta aysan khaarijin.
Previous Jaamac Karaaciin:Burco waxay noqon doontaa Meel wadaadadu Lafaha Ku cunaan Ama Magaalo La laafyoota dhigeed
Next Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda JSL, oo dhaariyay xubin buuxinaysa jago ka bannaanaatay golaha Guurtida.
‘Burnt out and pushed beyond their limits’: nurses struggle to work and care for own families September 28, 2021
Shaxaha rasmiga ah guud ahaan kulammada caawa ee kooxaha Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Real Madrid, ee tartanka Champions League oo la shaaciyey September 28, 2021